Amasondo e-Mac Pro manje aseyatholakala esitolo se-Apple | Ngivela kwa-mac
Amasondo eMac Pro aseyatholakala esitolo se-Apple
Ngaphandle kokungabaza lesi isesekeli abantu abambalwa abazovuma ukuthenga, amasondo eMac Pro kusuka I-850 euro! Yebo, intengo yalesi sesekeli seMac Pro iyabiza kanye nesikrini futhi nemishini uqobo, sibhekene namanani angenakufinyelelwa iningi lethu, angumkhiqizo owenzelwe futhi owenzelwe ngqo ochwepheshe abazothola imali eningi nabo ukuze bakwazi ukulinganisa ukutshalwa kwezimali, okungeyona encane.
Khumbula ukuthi intengo eyisisekelo yalezi IMac Pro iqala ngama-euro ayizigidi ezingama-6.499 futhi lapho-ke singangeza ukucushwa kwangaphakathi okuningaki okungakunyusa kumanani angenakufinyeleleka kubantu abaningi. Ngokuqondakalayo ungangeza isikrini seRetina 6K samasentimitha angama-32 iPro Display XDR yama-euro ayizi-5.499 nesisekelo saso esithengwa ngokwehlukana ngama-euro ayi-1.099, ngakho-ke amasondo angama-849 euros akuzona izesekeli ezibiza kakhulu ...
Isondo lamasondo eMac Pro lenziwe ngensimbi engagqwali nenjoloba eyenzelwe ukukala lo mshini futhi ngawo ungahambisa imishini usuka kolunye uhlangothi iye kolunye kalula. Ikhithi yesondo ingeza ukhiye we-Allen kusuka ku-1/4 ″ kuye ku-4 mm, kepha amathuluzi angeziwe ayadingeka ukufaka amasondo kanye akufakiwe.
Shintsha ama-Mac Pro Legs wamaSondo engeza cishe u-2,5 cm ukuphakama yesakhiwo esijwayelekile semishini ngakho-ke lolu shintsho ekuphakameni kufanele lubhekwe uma ufuna ukuthenga ikhithi. Vele, kubonakala ngathi isesekeli esibizayo nokuthi bambalwa abantu noma izinkampani ezizogcina zithengile. Kuyiqiniso ukuthi amasondo angamangalisa kodwa intengo yawo iqine kakhulu noma ngabe ubheke kuphi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » Amasondo eMac Pro aseyatholakala esitolo se-Apple
I-Podcast 11 × 31: I-Retro isemfashinini
Ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi noma ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi busebenza kakhulu kunakuqala kulezi zinsuku